Sweden oo cambaareysay dowlada Masar | Somaliska
Wasiirka arimaha dibeda Sweden Carl Bildt ayaa cambaareeyay dowlada Masar sida ay ula dhaqmeyso dadka mudaharaadayaasha ah asagoo sheegay xooga ay dowlada isku dayayso in ay wax ku maamusho in aan la aqbali karin. Wasiirka ayaa sheegay in Dowlada Masar looga fadhiyo in doorashada bisha September ay u dhacdo qaab ay dadku ku qanacsanyihiin. Dhinaca kale wasaarada ayaa kula talisay dadka haysta dhalashada Sweden ee doonaya in ay u safraan Masar in ay ka fogaadaan waayo xaalada oo sii cakirantay.
Wasiirka arimaha dibeda Sweden Carl Bildt ayaa cambaareeyay dowlada Masar sida ay ula dhaqmeyso dadka mudaharaadayaasha ah asagoo sheegay xooga ay dowlada isku dayayso in ay wax ku maamusho in aan la aqbali karin.
Wasiirka ayaa sheegay in Dowlada Masar looga fadhiyo in doorashada bisha September ay u dhacdo qaab ay dadku ku qanacsanyihiin.
Dhinaca kale wasaarada ayaa kula talisay dadka haysta dhalashada Sweden ee doonaya in ay u safraan Masar in ay ka fogaadaan waayo xaalada oo sii cakirantay.